Aza mandoa vola amin'ny kopian'ny mailaka mivantana. Martech Zone
Talata, Jona 25, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Betsaka aminareo no mahalala fa avy amina mailaka mivantana aho. Na dia voaporofo aza fa lafo kokoa ny mailaka mivantana amin'ny fihenan'ny fiverenana raha ampitahaina amin'ny marketing amin'ny Internet, dia fantsona azo iainana hatrany izany. Hitanay ny tahan'ny fiverenana tsara amin'ny indostrian'ny B2B - izay nandao ny mailaka mivantana tamin'ny ankapobeny. Ny mailaka mivantana mifandraika amin'ny mpanjifa dia mbola indostria goavana tokoa.
Androany, naharay ireto takelaka telo nitovizako ireto tao anaty boaty mailako aho izay niresaka tamin'ny adiresy mitovy. Fonosana mivalona tsara tarehy izay noforonina tsara avy amin'ny olona ao amin'ny Victoria Secret. Ny marika tanora, Pink, dia malaza amin'ny tovovavy ary ny zanako vavy dia ao amin'ny lisitr'izy ireo. Mampalahelo fa ho an'i Victoria Secret, na izany aza, ny programa mailaka mivantana ataon'izy ireo dia tsy miasa tsara amin'ny fanafoanana ny fampielezan-kevitra. Nahazo ampahany 3 izahay tamin'ny adiresy mitovy. Roa no natolotra tamin'ny tsipelina isan-karazany tamin'ny anaran'ny zanako vavy ary ny iray naterina tamiko… Tsy fantatro ny antony.
Fahadisoana lafo ity. Ny tahiry ampiasaina amin'ireto fampielezan-kevitra ireto dia azo alefa mora foana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko izay hiantoka ny fandefasana ilay sombin-javatra amin'ny olona iray ihany ao amin'ilay adiresy. Ankoatr'izay, azo natambatra niaraka tamin'ny angon-drakitra momba ny maha-lahy na maha-vavy azy io mba hanafoanana ahy tanteraka amin'ny fandefasana mailaka.
Raha mikasa ny hanao fampielezana mailaka mivantana ianao dia tadidio fa ho tombontsoan'ny masoivoho sasany ny manatsara hatrany ny volany. Mampalahelo fa izany dia mitarika ny fiverenanao amin'ny taham-bola sy ny taham-pahavitrana midina amin'ny fomba tsy izy. Izay mety ho fampielezan-kevitra tsara eto dia mety hotaterina ho toy ny iray izay tsy nahavita tsara. Ataovy azo antoka fa najanona ny tahiry data anao alohan'ny handefasana azy ary anontanio ny maso ivoho raha toa izy ireo ka vonona hamerina ireo dika mitovy na sanganasa naverina.
Tags: fanokananamail mivantanamavokelyvictoria secret
Jery ​​todika amin'ny ho avy nomerika an'ny varotra manerantany
25 Jun 2013 amin'ny 11:42 AM
Mety ho lafo tokoa io mpivarotra manokana io - matetika mandefa tapakila ho an'ny vokatra maimaim-poana amin'ny alàlan'ny mailaka. Raha tokony ho ilay singa tokana, araka ny tokony ho izy, ny zanakao vavy dia afaka manangona amin'ny entana telo maimaimpoana noho ny lesoka. Tsara ho azy - ratsy ho an'ny farany ambany. (Sazy tsy fanahy iniana fa avela hihomehy izy.)